အစ်မတို့က တကယ်ကို မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားတာပါ ချမ်းချမ်း - Yangon Media Group
အစ်မတို့က တကယ်ကို မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားတာပါ ချမ်းချမ်း
ယခုအချိန်ကစပြီး ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမယ့် အလုပ်များကိုသာ လုပ်သွားမယ်လို့ တေးသံရှင်ချမ်းချမ်းက ပြောပါတယ်။ ”ပြောရရင် လူ့ဘဝဆိုတာအရမ်းကို တိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အိမ် ထောင်ရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အခုလိုပြောပါတယ်။
”အဓိကအဖြေထွက်သွားတာကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲနားလည်မှုရှိတယ် ပဲပြောပြော တကယ်အတွင်းကျကျ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ နားလည်မှုမရှိတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ အစ်မနဲ့သူနဲ့က ရထားလမ်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အစ်မတို့က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အရမ်းချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကလည်း တစ်ခါတလေကျရင် ဘဝဆိုတာချစ်နေရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ သူလည်း အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေး တွေ အများကြီးရှိတာပဲ။ အစ်မ ကြောင့် ပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေ မဖြစ်စေရဘူး။ အစ်မလည်းလုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတာကတော့ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ အခုဆိုရင်သမီးအတွက် လိုအပ်တာတွေကို သူလည်းလုပ် ပေးပါတယ်။ အစ်မလည်းလုပ်တယ်။ အရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ လူမှု ရေးတို့ အိမ်ထောင်ရေးတို့ဆိုတာ အစိုးမရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တိုင်းလည်း ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ မဖြစ်ချင်လို့လည်း တားလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ အပေါ်မှာ ကိုယ်ကဘာမှတော့ခံစားမှုတွေမရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ်နှစ်နှစ် ကျော်ကျော်လောက် ကြိုးစားထားတဲ့အခွေလေးထွက်လာတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်းမှ အိမ်ထောင်ရေး လူမှုရေး တွေအဆင်မပြေဘူး။ ကျန်တာတော့များများစားစား မခံစားတော့ပါဘူး။ လူ့ဘဝဆိုတာ ဖြစ်တာပျက်တာများပါတယ်။ အဓိကကတော့ စိတ်ပါပဲ။ စိတ်ထားတတ်ရင် အကုန်လုံးအေးချမ်းပါတယ်။ ကိုယ်သွားချင်တာတွေ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်လို့ရပြီ။ သူ (ဘုဏ်းသိုက်)လည်းလုပ်လို့ရပါပြီ။ အစ်မတို့က တကယ်ကိုမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားတာပါ”လို့ပြောပါတယ်။
”အစ်မက အလုပ်တွေကို လောဘကြီးတယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ အစ်မ ၂၄နာရီအလုပ် လုပ်ပါတယ်။ ပွဲကပြန်လာရင် ကလေး အလုပ်တွေလုပ်တယ်။ အိမ်အလုပ် တွေလုပ်တယ်။ နောက်ခွေးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်။ နောက်ဘယ်အချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတ စဉ်းစားတယ်။ ငါဘယ်လောက်ချမ်း သာအောင်လုပ်မယ်။ ဘယ်လိုဝင် ငွေတိုးအောင်လုပ်မယ်။ အဲဒီလိုစိတ် မျိုးပဲရှိပါတယ်။ သူတစ်ပါးထိခိုက် နစ်နာအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အေး ဆေးတယ်။ အစ်မတို့ ကလေးကို တစ်ပတ်ကိုသုံးရက် လေးရက်စီခွဲပြီး ထိန်းမယ်။ အစ်မခရီးသွားရင် သူထိန်းမယ်။ သူခရီးသွားရင်တော့ ကိုယ့် အိမ်ပြန်လာပို့တယ်။ တစ်ခါတလေ သမီးက သူ့အဖေကိုမေးရင် ပို့ပေး လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါအဆင်ပြေတယ်။ ကလေးကို စိတ်ဒဏ်ရာမပေးဘူး။ မတားမြစ်ဘူး။ အစ်မတို့ကခွဲနေတာ ကလွဲရင် ကျန်တာအကုန်ပြည့်စုံတယ်” လို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ အနုပညာလှုပ် ရှားမှုအနေနဲ့ လာမယ့် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် မေလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လတွေမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အဆိုတော်ျွ ဇာနည်နဲ့အတူ သွားရောက်ဖျော်ဖြေ သွားမှာဖြစ်ပြီး ကြားကာလတွေမှာ တော့ ပြည်တွင်းဖျော်ဖြေရေးများ တွင် ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခရစ္စမတ်နေ့မှာ ရုံး၊ ကျောင်း၊ ဈေးပိတ်ရက်များနှင့် တိုက်ဆိုင်နေသောကြောင့် တောင်သမန်အင်းသိ?
'ရုပ်ရှင်အသစ်နဲ့ ပရိသတ်ကို အံ့အားသင့်စေဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်' မားဂေါ့တ်ရိုဘီ
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် လိင်ဆွဲဆောင်နိုင်မှု အမြင့်ဆုံး အမျိုးသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဘလိတ်ခ်
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တိမ်းရှောင်စခန်းများ ပိတ်သိမ်း၍ ပြန်လည် နေရာချထားနိုင်ရေး စီမံချက်
တပ်ပိုင်မြေမှ ထွက်ခွာသွားရန်နှင့် လိုက်နာမှုမရှိပါက ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်??
ဖိလစ်ပိုင် ဆိပ်ကမ်းတွင် စွန့်ပစ်ထားသော အမှိုက်များကို ကနေဒါအစိုးရ ပြန်သယ်ယူ
ဒီချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် သစ် ရွေးချယ်မှုစတင် ပါတီအပေါ် သစ္စာရှိသူများကို အဓိကထားရွေးမည် ဟုဆ??